तेस्रो लहर आउनसक्ने सम्भावना बारे के भन्छन् विज्ञ? – Health Post Nepal
२०७८ भदौ १२ गते १७:१०
अहिले जनस्वाथ्यका मापदण्ड लागू नगर्दा गत साउनदेखि उकालो लागेको कोरोना भाइरस संक्रमण दर अहिले पनि जारी छ। गत साउन १ गते २ हजार ९३६ मा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएकामा गत साउन ७ गतेसम्म आइपुग्दा २ हजार ७१४ जना संक्रमित पुगेका छन्। यस्तै गत शुक्रबार २ हजार ६५, भदौ १० गते २ हजार ४३३, भदौ ९ गते २ हजार ४८२, भदौ ८ गते २ हजार ५२५ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
पिसिआर परीक्षण गर्दा अहिले १९.५ प्रतिशतमा संक्रमण देखिएको छ। संक्रमित सबैले परीक्षण नगराउँदा पनि संक्रमणको यकीन तथ्यांक बाहिर नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले पनि सामान्य रुघाखोकी, ज्वरो आएका मानिस परीक्षण गराउन नगएकाले घरमै संक्रमित रहेका मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलले जानकारी दिए। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बाँस्तोलाले मानिस आफैं सचेत भएर संक्रमणलाई रोक्नुपर्ने बताउँछन्। उनले दैनिक १० देखि २० जना अस्पतालमा आइरहेका भन्दै खोप लगाएका मानिसबाट पनि संक्रमण सर्नसक्ने भएकाले स्वास्थ्यको मापदण्ड लागू गर्न आग्रह गरे।
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. पौडेलले साँझ ८ बजेपछि होटेल तथा रेन्टुरेन्ट बन्द गरेर एउटा समूह संक्रमणको जोखिमबाट जोगिएको बताए। ‘रेन्टुरेन्टमा बसेर खाना, खाजा खानेले मास्क लगाउँदैनन्’, उनले भने, ‘तर, साँझ ८ बजेपछि रेन्टुरेन्ट बन्द हुँदा एउटा समूह संक्रमणको जोखिमबाट जोगिएको छ।’